Selfie ရိုက်ကြစို့ | YOYARLAY
Published: November 9, 20174:16 am
Vivo က သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ထုတ်ကုန် V7+ ကို ထုတ်တော့ Selfie အသားပေးအဖြစ် 24MP အရှေ့ကင်မရာကို တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ 24MP ဟာ စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေထဲမှာ mega pixel အများဆုံး အဖြစ် ဦးဆောင်နေတဲ့ MP ပမာဏပါ။
24MP, Aperture f2.0 ဖြစ်ပြီး Selfie Soft light ပါဝင်တဲ့အပြင် အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်တဲ့ မျက်နှာအလှ ပြုပြင်စနစ် 7.0၊ နောက်ခံဝေဝါးပေးတဲ့ စနစ်၊ အဖွဲ့လိုက် Selfie စတဲ့ အကောင်းဆုံး အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ feature တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Selfie ဆိုတာက ကိုယ့်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ကိုယ် လွယ်လွယ်ကူကူ ဓာတ်ပုံရိုက်တာလို့ ပြောပေမယ့် ကြည်လင်ပြတ်သား၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ရိုက်ချက် ဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်သေးတာမဟုတ်လား။ ဒီအတွက် အထောက်အပံ့တွေတော့ လိုတာပေါ့။ V7+ ကတော့ Selfie သမားတွေအတွက် ဦးတည်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာဆိုတော့ အတော်လေးကို ပြည့်စုံပြီးသားပါ။
ကဲ … အာကာသထဲတောင် Selfie ရိုက်နေကြတဲ့ခေတ်မှာ ဘယ်သူမဆို Selfie ကောင်းကောင်းလေးတော့ ရိုက်ထားသင့်တယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါကြောင့်မို့ တစ်ချိန်မှာ ပြန်မရတော့မယ့် အခိုက်အတန့်တွေကို အကောင်းဆုံး ဖမ်းယူသိမ်းဆည်းထားကြအောင်လား။ Ok! Let’s Selfie.
မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေကို Facebook ပေါ်ကနေ ဖယ်ဖို့အတွက် မက်ဇူကာဘတ်ဟာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ Facebook Status မှ ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ Post Views: 299
Published: November 22, 20162:23 am
သတိထားရမယ့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV Rays ) အန္တရာယ်
Published: April 24, 20191:20 pm